सजना बराल - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार महिलाको उत्थानबिना समाजको उत्थान सम्भव नहुने बताएका थिए । ‘प्रथम राष्ट्रिय महिला दिवस’ को असवरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको र उनीहरूलाई पुरुषसरह अधिकार दिलाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बजेट : ‘स्टार्टअप’ लाई राहत
टुटल र पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकलाई सरकारले बजेटमार्फत् करमा राहत दिएको छ । बुधबारको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्टार्टअप व्यवसाय गरेकाहरूलाई २०७६ पौष मसान्तभित्र करको दायरामा आए यसअघि तोकिएको जरिवाना मिनाहा हुने बताएका थिए । कर नतिरेको विषयलाई लिएर टुटल र पठाओ पछिल्लो समय विवादित थिए ।
विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ६८ प्रतिशत कम
सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा यसपालिको आवमा ६८ प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ ।
लिंकन कलेजमा अध्ययनरत कल्पना गुरुङ महिनावारी हुँदा डिस्पोजेबल स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छिन् । राति सुत्दा ह्विस्पर अल्ट्रा ओभरनाइट र दिनमा ह्विस्परकै अल्ट्रा सफ्ट वा स्टेफ्री सेक्योर लगाउने गरेकी छन् ।
सजना बरालका लेखहरु :
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको नवनिर्मित चारतले भवनको भुइँतलामा स्थापना गरिएको केन्द्रको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यावदले बुधबार उद्घाटन गरे ।
जेठ १ का लागि तयार छैन एकद्वार सेवा केन्द्र
सरकारले यही जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि तोकिएको मितिभन्दा तीन दिनअघिसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छैन ।
वेबसाइटमार्फत काम र कामदार
घरको पानी टयांकी सफा गर्नलाई मान्छे चाहियो, कहाँ खोज्ने ? बिहेमा सेलरोटी पकाउनुपर्‍यो, कसलाई भन्ने ? घरको नाला बिगि्रए कसरी प्लम्बर पत्ता लगाउने ? सुत्केरी स्याहार्नेहरू कसरी खोज्ने ? बेलाबखत आइपर्ने यस्ता ठूलासाना समस्या समाधानका लागि अचेल केही स्टार्टअप कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् ।
'गिग जब’ मा युवा आकर्षण
सूचना प्रविधिमा स्नातक सुमीत बज्राचार्य केही समययता अमेरिकाको बटस्प्लास डटकमका लागि क्षेत्रपाटीस्थित घरमै बसेर काम गर्दै आएक छन् । घरमा होहल्ला भए को-वर्किङ अफिसतिर लाग्छन् । उनको काम भनेको विभिन्न ग्राहकका लागि च्याट एप्लिकेसन बनाउने हो । घण्टाको १२ अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने गरेको उनले बताए ।
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : बल्ल एकद्वार
लगानीकर्तालाई वर्षाै‌ंदेखि आश्वासन बाँडिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र (एकद्वार निकाय) बल्ल गठन भएको छ । गत १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकद्वार निकाय गठन गरिएको हो । शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १ देखि सेवा दिने घोषणा गरिएको छ ।